Edge uye Visual Studio Code. Musanganiswa mukuru wewebhu dhizaini | Linux Vakapindwa muropa
Ndinoreurura, ndinoda zvigadzirwa zveMicrosoft. Kwete chaizvo Windows, asi sezvo Apple neGoogle vakazvirova mumusika wekufambisa, Iyo kambani yakagadzira dzinoverengeka dzinonakidza kwazvo open source application, neEdge uye VS Code vari vaviri vevandinofarira.
Ndosaka zvaitaridzika kuva zvakanaka kwazvo kwandiri iyo sarudzo yekusanganisa mabhurawuza ekuvandudza maturusi mune kodhi mhariri. Kunyangwe, haina kumira kunetsekana neni kuti izvi zvinobatsira kubatanidza iyo chaiyo monopoly muwebhu inopa injini.
Microsoft ichangobva kuzivisa kuti yave kuwanikwa iyo nyowani yeMicrosoft Edge Zvishandiso zveVS Code yekuwedzera. Uku kuwedzera kutsva kuchabvumidza vagadziri kushandisa zvishandiso zvekuvandudza izvo zvinosanganisirwa mubrowser yavo kubva kumhariri
Iyo skrini iwe yaunoona pakutanga kwechinyorwa ndeye yangu yekumisikidza yeiyo yekuvandudza vhezheni yeVisual Studio Code paLinux.
Iyo nyowani yekuwedzera inobvumira vanogadzira kuti vashandise iyo Edge Elements uye Network chishandiso kubva mukati mekushandisa. Nenzira iyi unogona kuona masitaera, dhizaini uye CSS matambudziko uye nekugadzirisa iyo kodhi pasina kuvhura imwe chirongwa.
Izvi zvinogadzirisa kutadza kwakasuwa nevamwe vashanduri muLinux. Kunze kweBlueGriffon, iyo inobhadharwa, pakanga pasina chishandiso chakabatanidza mupepeti ane simba nekwaniso yekuona saiti.
Mukudaro, kuzvipira kweMicrosoft kusoftware yemahara (iyo kunyangwe vanhu vazhinji vasingairangarire kubva pamazuva ekupedzisira aSteve Ballmer semutungamiri wekambani) kwaive kukwezva vagadziri vaive vachiwedzera kusarudza dzimwe nzira dzemakodhi dzakavhurwa. Pasina kupokana, ivo vanozokoshesa kudzikiswa kwenguva yekugadzirisa iyo iyo yekuwedzera nyowani ichaunza
Parizvino chimbo ichi chaive muchikamu chekuyedza muchimiro chemaviri ekuwedzera.
n bharaki rebasa.
Zvirongwa zvekuwedzera zvinobvumidza vashandisi kusarudza nzira mbiri dzekuvhura browser. Mune isina musoro modhi, bhurawuza harivhure mune rakasiyana hwindo, asi rinotovhura mune yekuruboshwe pane yemupepeti.
Iwo makuru anotsigirwa maficha anosanganisira ekugadzirisa madhairekita kuvhura Microsoft Edge browser mune iri kure yekugadzirisa mamiriro uye otomatiki kubatana kwematurusi.
Iyo zvakare inopa yekutarisa padivi kunongedzera kwekugadzirisa zvinangwa, senge ma tabo uye ekuwedzera, uye skrini-yekukanda ficha iyo inobvumira vanogadzira kuti vatarise yavo peji nekodhi panguva imwe chete.
Chinhu chakakosha ndechekuti lIyo yekuwedzera inoda kuve neMicrosoft Edge yakaiswa. Zvinoita kunge isinga shande ne Chrome kana imwe browser.
1 Edge uye Visual Studio Code Zvishandiso zvinoshanda paLinux?
2 Mashandisiro ekuwedzera
Edge uye Visual Studio Code Zvishandiso zvinoshanda paLinux?
Ichi chinhu chakakosha kucherechedzwa. Kunyangwe iko kuwedzera kuri kutove muVS Code yekuwedzera chitoro, uye vashandisi veLinux vanogona kuiisa, kuti uwane mukana wekuyedza vhezheni yeEdge browser iwe uchafanirwa kumirira kusvika imwe nguva muna Gumiguru (kunyangwe ini ndichifungidzira iwe uchigona kuita kumwe kunoshanda uchishandisa zvekufananidza zvinongedzo).
Kuburitswa kwekutanga kuchave nemapakeji ezvese zvakakura kugoverwa kweLinux, kusanganisira Ubuntu, Fedora, uye kuvhuraSUSE vachishandisa mapakeji echinyakare panzvimbo pemafomati-epuratifomu mafomu seSnap, FlatPak, kana Appimage. Panguva ino inogona kungotorwa pasi kubva papeji re projekiti.
Zvinozivikanwa kuti kunze kwenzira dzekuenzanisa uchishandisa maakaunzi eMicrosoft, yekutanga miedzo vhezheni ichave nehunhu hwakafanana neiyo Windows uye Mac vhezheni. Naizvozvo, zvinofanirwa kutarisirwa kuti zvichabatana zvakakwana pamwe nekuwedzera kwatiri kukurukura.
Maitiro ekushandisa kuwedzeredza anotevera
1) Isa chero vhezheni yeMicrosoft Edge.
2) Isa VS Code
3) Isa iyo Microsoft Edge Zvishandiso yeVS Kodhi yekuwedzera
4) Isa iyo Debugger yeMicrosoft Ede yekuwedzera.
5) Vhura dhairekitori iro rine chirongwa chaunoda kushanda pairi.
Kune avo vanhu vasingade chero chinhu chine chekuita neMicrosoft, vanogona kuedza kushandisa VS Codium, VS Code kodhi kodhi, yakagadziriswa kubva kune ese Microsoft telemetry maturusi uye nekunyengedza iyo system mukufunga Chromium iri Edge. Ehezve ini handina chokwadi chaizvo kuti zvinoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Edge uye Visual Studio Code. Kubatanidzwa kukuru kwevagadziri vewebhu
Mangani madhora iwe aunobhadharwa kukwidziridzwa?
Ivo vari kunyadzisa vamwe ... ndapota enda unokwidziridza zvinhu zveMicrosoft kumaforamu kana mapeji emicrosoft windows ... unofunga zvechokwadi kuti vanhu idofo rakadaro?
Tukai! Ndeipi nyika yepakati nepakati uye wacky vanhu vatiri kuona.
Hapana chakaipa. Une mvumo yekutaura zvandinoda. Iko kusimba kwevanhu iko zvino.
“Ndinoreurura, ndinoda zvigadzirwa zveMicrosoft. Kwete chaizvo Windows, asi kubvira Apple neGoogle zvavakarova mumusika we mobile, kambani yakagadzira dzinoverengeka dzinonakidza open open application, neEdge neVS Code vari vaviri vandinoda. "
Iko kutanga kwoutsinye kweiyo linux post !! Ndinokukorokotedza nekumira kwako kuva nepfungwa dzakaenzana, tinofanirwa kubatsirwa nesource uye kana maturusi achibva kuMicrosoft, enda kumberi…. Ngatisiyei kurwa kwe windows vs linux kwema 90s nekuti openource nhasi ndiyo nzira.
Kutenda nenyaya inonakidza yakadai.
+ 1M vadzidzi vanodzidza Linux nekuisa ...